Eoropa Afovoany & Atsinanana15 Oktobra 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Oktobra 2012
Arabia Saodita: Raisina Toy Ny Gadra Rehetra ny Gadra “Tondro Molotra”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Oktobra 2012
Taorian'ny fihetsiketsehana kely mitsitokotoko nandrakotra ny firenena izay tsy mbola fahita hatrizay , namoaka fanambarana ny Minisiteran'ny Atitany mikasika ireo gadra tondro molotra. Teboka telo no hita amin'ny fanambarana: Tsy maintsy mandalo ny Biraon'ny Fanadihadiana sy ny Fampanoavana sy ny Tribonaly Manokana momba ny ady heloka bevava avokoa ny gadra voampanga amin'ny asa sy heloka ataon'ny...
Amerika Avaratra10 Oktobra 2012
Ejipta: Mahatsiaro An'i Maspero; Miandry Fampiharana Ny Lalàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Oktobra 2012
Nahatsiaro ny tranga namonoana olona nahatsiravina tao Maspero ny Ejiptiana androany, nianiana ny hamaly faty ny ràn'ireo maritiora sy hanao izay hitohizan'ny revolisiona (fiovàna). Ny 9 Oktobra tamin'ny taona lasa, Kristiana Copts 28 no maty ary 200 hafa naratra tamin'ny fanafihan'ny tafika ireo mpanao hetsi-panoherana teo ivelan'ny foiben-toeran'ny fampahalalam-baovaom-panjakana tao...
Eoropa Andrefana09 Oktobra 2012
Torkia: Olona an'Arivony Manohitra Ny Ady Ao Syria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Oktobra 2012
Nitifitra lasibatra Syriana ny miaramilan'i Torkia ho valin'ny famonoana nahafatesana sivily Tiorka dimy nataon'ny tafi-panjakana Syriana. Namoaka fanambarana avy hatrany ny ny tao amin'ny biraon'ny praiminisitra tiorka Tayyip Erdogan taorian'izany, tamin'ny filazana hoe: Our armed forces in the border region responded immediately to this abominable attack in line with their rules of engagement; targets...
Fitakian'ny Kolombiana Tsy Misy Vono-olona Anatin'ny 24 Ora
Amerika Latina08 Oktobra 2012
Vaovao farany (4 Oktobra 2012): Nitatitra i Carlos Eduardo Valdés Moreno, talen'ny Ivom-pahasalamana Misahana ny Fandidiam-Paty sy ny Siansan'ny Diam-bono ao Bogota fa 28 ny isan'ny vono-olona nitranga tao Kolombia tamin'ny 2 Oktobra 2012: “matetika tafakatra hatramin'ny 79 ny isan'ny namoy ny ainy noho ny vono-olona mahatsiravina ao amin'ny firenena [Kolombia]. Tratrantsika...